Restaorasiônisma - Wikipedia
Ny restaorasiônisma na restorasiônisma dia finoana ny tokony hamerenana ny fivavahana kristiana amin’ ny finoany sy ny fanaony tany amin’ ny taonjato voalohany. Ny restaorasiônisma koa dia finoana ilazana ny tena ho mpamerina ny fivavahana kristiana ho amin’ izany toetrany voalohany izany. Mety ho ny rafitra nisy tany aloha na ny fitondran-tena tany aloha no lazaina amin’ izany na koa ny fiainana mivantana ny asan’ ny Fanahy Masina. Ilaina izany famerenana ny kristianisma tany aloha izany, hoy ireo restaorasiônista, noho ny fisian’ ny famadihana ny fivavahana kristiana tsy ho amin’ ny tena izy (fialana amin' ny finoana marina). Ho an’ ny sasany kosa, izany fanimbana ny fivavahana kristiana izany (apôstasia) dia niseho fotoana kely taorian’ ny nahafatesan’ i Jesoa Kristy, fa ho an’ ny hafa indray dia niseho tsikelikely izany teo anelanelan’ ny taonjato faha-2 sy ny taonjato faha-5.
Ny teny hoe restaorasiônisma dia ampiasaina indrindra hanondroana ireo antokom-pivavahana niforona tao Etazonia, sahala amin’ ny an’ ireo mpanaraka an’ i Campbell na ireo Kristadelfiana, sy iresahana ny amin’ ny Pentekôtista, ny Adventista (sy ny sampany rehetra), ny môrmônisma (sy ireo fivavahana nipoitra avy aminy) ary ny Vavolombelon’ i Jehovah.
1 Fiverenana amin' ny foto-pinoana kristiana marina
2 Fihetsiketsehana restaorasiônista
2.1 Ny restaorasiônisma amerikana
2.2 Ny Fiangonana kristadelfiana
2.4 Ny môrmônisma
2.5 Ny Vavolombelon’i Jehovah
Fiverenana amin' ny foto-pinoana kristiana marina[hanova | hanova ny fango]
Ny hevitr’ ireo Restaorasiônista
Ny restaorasiônisma dia mifototra amin’ ny fiheverana fa nisy fialana tamin’ ny finoana kristiana marina teo amin’ ny tantaran’ ny kristianisma. Ny fiangonana kristiana mitana ny mahazatra (Katôlika sy Ôrtôdôksa sy ny Anglikana ary ny ankamaroan' ny Prôtestanta) dia heverin’ ireo restaorasiônista fa niala tamin’ ireo hevi-dehibe iorenan’ ny fivavahana kristiana marina tany am-piandohany noho ny fizarazarana anatiny, ny fahadisoan’ ny fivoasany ny Soratra Masina na ny fitadiavana marimaritra iraisana amin’ ny fanaon' izao tontolo izao.
Ny hevitr’ ireo fiangonana mitana ny mahazatra
Ireo Kristiana mitana ny mahazatra ireo kosa, etsy an-daniny, dia manambara fa ny Fiangonana marina dia naorin’ i Jesoa Kristy araka ny fomban’ Andriamanitra sady izany Fiangonana izany dia tsy mety hanjavona na oviana na oviana eto an-tany. Ny Katôlika sy ny Ôrtôdôksa ary ny Anglikana dia mino ny fitohizana ara-bakitenin’ ny Fiangonana voalohany ao amin’ ny atao hoe fifandimbiasana apôstôlika. Ny Prôtestanta kosa dia manambara fa ireo andry sy rafitry ny Fiangonana kristiana (institosiona) ireo dia zavatra momba ny olombelona ka mety ho diso; mino izy ireo fa nisy ny fahadisoana lehibe teo amin’ ny fivavahana kristiana, nefa aminy ny fivavahana kristiana dia tsy niala tamin’ ny hafatra marin’ ny Filazantsara, ny mpino dia mivondrona ao amin’ ny Fiangonan’ Andriamanitra na dia eo aza ny tsy maha tongalafatra sy ny mety ho fahadisoan’ ireo andry ara-pivavahana ireo.
Fihetsiketsehana restaorasiônista[hanova | hanova ny fango]
Ny restaorasiônisma amerikana[hanova | hanova ny fango]
Ny fihetsiketsehana restaorasiônista amerikana dia nanomboka tamin’i Barton W. Stona tao Cane Ridge ao Kentucky any Etazonia; niantso ny tenany hoe "Kristiana" fotsiny ireo mpino. Ny faharoa dia nanomboka tao andrefan’i Pensilvania sy tao Virjinia Andrefana. Notarihin’i Thomas Campbell sy ny zanany lahy atao hoe Alexander Campbell; niantso ny tenany hoe "Mpianatr’ i Kristy" ireo mpino. Antokom-pivavahana maro no nipoitra tamin’io fihetsiketsehana io, isan’izany ny Fiangonana Kristianan’ny Mpianatr’i Kristy (ang.: The Christian Church of the Disciples of Christ) sy ireo Fiangonana Iraisam-pirenen’i Kristy (ang.: International Churches of Christ).
Ny Fiangonana kristadelfiana[hanova | hanova ny fango]
Ny Fiangonana kristadelfiana dia fiangonana tsy mino ny Trinite sy ny tsy fahafatesan'ny fanahin'ny olombelona izay noheveriny fa tsy araka ny Baiboly sy finoanoam-poana. Ny Kristadelfiana dia mino ny teny rehetra voalaza ao amin'ny Baiboly, nefa misy andalana izay raisiny ho manana hevitra an'ohatra fotsiny ihany. Izany no ilazany ao amin'ny Fiekem-pinoany fa ny devoly dia fanoharana fotsiny. Mandà ny fisian'i Jesosy talohan'ny fahaterahany teto an-tany koa izy ireo.
Ny Adventisma dia fampianarana manambara mialoha ny fiavian’i Kristy tsy ho ela. Ilay mpitory teny atao hoe William Miller (1782-1849) no nanambara ny fototra iorenan’ny adventisma. Ny ngeza indrindra amin’ny fiangonana adventista dia ny Fiangonana Adventista mitandrina ny Andro Fahafito. Ny fampianarana ny amin’ny fiavian’i Kristy fanindroany izay ho hita maso eran’izao tontolo izao no iraisan’ny Fiangonana adventista rehetra.
Ny Adventista mitandrina ny Andro Fahafito dia mino ny fiverenan’i Kristy avy amin’ny rahon’ny lanitra alohan’ny arivo taona (milenioma). Manaja ny sabatan’ny andro fahafito (Asabotsy) sady mino ny asa fanompoan’i Kristy izay tanteraka indroa miantoana ao amin’ny fitoerana masina ao an-danitra izy ireo. Amin’izy ireo dia misy dikany ara-paminaniana ny hafatry ny anjely telo ao amin’ny Apokalipsy (Apo. 14) ary misy ifandraisany amin’ny asa fanompoan’i Kristy izany ao amin’ny masina indrindra ao amin’ny fitoerana masina ao an-danitra ka izany dia fanombohan’ny asa fitsarana izay mialoha ny ny fiverenan’i Jesosy amin’ny fiafaran’izao tontolo izao. Mino ny tsi-feteza-maty misy fepetra izay omen’i Kristy ny olona ny Adventista mitandrina ny Andro Fahafito. Manana fomba fiaina mitandro ny fahasalamana ny Adventista amin’ny fanaovana sakafo mifandanja sy ny tsy fifohana na fisotroana na fihinanana zava-mahadomelina.
Ny môrmônisma [hanova | hanova ny fango]
Ny Olomasin’ny Andro Farany (sy ireo fiangonana maro hafa nipoitra tamin’ny môrmônisma) dia mihevitra fa ny fialana amin’ny finoana marina dia nanomboka fotoana kely taorian’ny fanenjehana sy fahafatesan’ireo Apôstôly roa ambin’ny folo voafidin’i Kristy sy ireo olomasina maro. Rehefa tsy teto an-tany intsony izy ireo, ireo fanalahidy sy fahefana ho enti-mitondra dia nesorina tsy ho ety an-tany. Araka ireo Olomasin’ny Andro Farany, ny apostoly dia nanao izay hihazonana ny fampianarana marin’ny Fiangonana. Rehefa tsy teo ireo apostoly ka ela ny ela dia nihasimba ny foto-pampianarana ary nisy fanovana tsy nahazoana alalana izay tafiditra tao amin’ny fandaminan’ny Fiangonana sy tao amin’ny fanosorana ho amin’ny fahefan’ny mpisorona toy ny batisa sy ny fanomezam-pahasoavan’ny-Fanahy Masina. Raha tsy misy Fanambaràna mitohy avy amin’Andriamanitra sy fahefana hanao ny asam-pisoronana, ny olombelona dia hanankina amin’ny fahendrena maha olona azy ny fivoasany ny Soratra Masina sy ny foto-kevitra ary ny fanirahan’i Jesoa Kristy eo amin’ireo taonjato hifandimby. Noho io fandisoam-pivavahana ankapobeny io, ireo olona mikatsaka ny fahamarinana dia nanohitra ny fanaon’ny fivavahana tamin’izany fotoana izany, satria nahatsapa fa misy fampianarana ny amin’ny Filazantsara izay nisy novana na very. Noho ny ezaka nataon’izy ireo, maro amin’ny Fiangonana protestanta no voalamina. Fiomanana amin’ny fiverenan’ny Filazantsara indray ny Refôrmasiôna (na Refôrma). Izany fanavaozana izany dia niteraka fahalalahana ara-pivavahana lehibe, izay nanomana ho amin’ny fanarenana farany. Araka ny finoana mormona, Andriamanitra sy i Jesoa Kristy dia niseho tamin’i Joseph Smith tamin’ny taona 1820 tamin’ilay Fahitana Voalohany, ka tamin’izany no nitateran’i Joseph Smith hoe:
“ Ny tanjoko, raha ndeha hanontany ny Tompo, dia ny hamantatra hoe iza amin’ireo antokom-pivavahana no manana ny marina, mba hahalalako izay tokony hikambanako - … Ny valiny azoko dia ny tsy hikambanako na amin’ny iray amin’izy ireo, satria diso daholo izy ireo; ary nilaza tamiko ilay Olona niresaka tamiko fa ny fanekem-pinoan’izy ireo dia fahavetavetana eo imasony; fa niharan’ny fahalovana ireo manampahaizany; fa “manatona ahy amin’ny molony izy ireo, fa ny fony lavitra ahy; fa didin’olombelona no ampitainy ho fampianarana, izay miendri-panajana lalina ny fivavahana nefa tsy inoany ny heriny.” Nandrara ahy tsy hikambana na dia amin’ny iray amin’izy ireo indray izy …”. (Voangy Lafo Vidy, Joseph Smith 1.18-20)
Araka ny finoana mormona, olona maro tamin’izany fotoana izany no nino an’i Kristy sy niezaka ny hahazo sy nampianatra ny Filazantsarany, nefa tsy nanana ny fahamarinana feno na ny fahefana ho mpisorona mba hanao batisa sy hanatanteraka ireo asam-pamonjena. Araka ny fampianarana mormona ihany, satria Andriamanitra nanao izany ho an’i Adama sy i Noa sy i Abrahama sy i Mosesy (na Môizy) ary tamin’ireo mpaminany hafa, dia niantso an’ i Joseph Smith izy ho mpaminany hamerina indray ny fahafenoan’ny Filazantsara eto ambonin’ny tany mba hanomanana ny Fiavian’ i Kristy Fanidroany. Izany trangan-javatra izany no nanombohan'ny fahatanterahan’ny fanarenana ho amin'ny fomban'ny Fiangonana voalohany.
Ny Vavolombelon’i Jehovah[hanova | hanova ny fango]
Ny Vavolombelon’i Jehovah dia mihevitra fa ny fadisoam-pinoana lehibe dia nanomboka fotoana kely taorian’ny nahafatesan’ny apostoly farany ary mihevitra koa izy ireo fa izany fialana amin'ny finoana marina izany dia nanjary nahenika ny fivavahana kristiana manontolo tamin’ny Konsily voalohany tao Nikea (na Nisea), tamin’ny nandraisana ny fiaikem-pinoana nikeana, izay nametraka ny fampianarana ny Trinite (izay heveriny fa naorina tamin’ny fampisana ny filôzôfian’ i Plato sy ny an’ ireo Sôfista grika) ho fototra iorenan’ny finoana kristiana marina.
Mino ny Vavolombelon’ i Jehovah fa Andriamanitra dia namerina indray ny tena fivavahana kristiana tamin’ny alalan’izy ireo, tamin’ny nanorenan’i Charles Taze Russell ny fikambanan’ny Mpianatry ny Baiboly (anglisy: Bible Students). Ho an’ireo Mpianatra ny Baiboly dia tafaverina ny finoana voalohany amin’ny fivoasana ara-bakiteny amin’ny ankapobeny ny Baiboly ary ny fandavan-tena tanteraka hanaraka ny fampianaran’ny Baiboly.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Restaorasiônisma&oldid=1012627"
Voaova farany tamin'ny 6 Jolay 2021 amin'ny 12:46 ity pejy ity.